Izinzuzo Inja Grooming Amathebula - China Ningbo Haoshu Yinjiang Jintangli
Ithebula ubeka ngokuzenzakalelayo inja yakho ezingeni ukuphakama esilungele nokuzilungisa. Awunayo ukufunda phezu noma uzame bokuhamba nomkhwenyana inja yakho ngenkathi yena englaweni yakho. Kunalokho, etafuleni nokuzilungisa ubeka inja ngesikhathi ibambene ephelele nokuzilungisa.
Cishe bonke amatafula inja nokuzilungisa ihambisane uhlobo oluthile non-ukushelela indawo - musa ukuthenga eyodwa ngaphandle kukhona ukupheda ribbed noma uhlobo oluthile kwesembozo lula inja yakho ukubamba. Inja yakho kuyoba ezimanzi futhi kungaba agxumele bese uslayida uma ebusweni akuphephile. Ngaphezu kwalokho, amatafula amaningi nokuzilungisa ihambisane ingalo zensimbi kahle ngesihibe engasetshenziswa ukugcina inja yakho ngokuphepha endaweni phakathi nokuzilungisa.
Shiya on, nehla
Nge inja nokuzilungisa amathebula noma wokubacindezela noma kagesi, ungakwazi wehlise etafuleni cishe yonke indlela eya phansi. Lesi isici esikhulu inja lokho esindayo noma ozwa kancane netwetwe noma ecindezelekile. Esikhundleni sokusebenzisa amandla ukuba sithwale inja indawo nokuzilungisa, wena umane sebenzisa leash ukuhamba inja ungene etafuleni. Lapho ukucija iphelile, yehlisa etafuleni futhi babe inja ukuhamba off.
isikhathi Iposi: Aug-09-2018